Indlela yokuphatha ifu nge-Chef Automate ne-AWS
Lawula ifu nge-Chef Automate ne-AWS
I-Chef ne-AWS: Inhlangano ebalulekile
I-Chef i-Automate njengenzuzo ye-oversaw
Nweba ekuxhumaneni kwakho ne-AWS
Amandla weChef yebhizinisi kanye neqembu elivulekile
AWS I-OpsWorks for Chef i-Automate iyindlela yokuhlanganyela emakethe phakathi kwe-Amazon Web Services kanye Isofthiwe ye-Boss, Inc. Okusho ukuthi, zombili izinhlangano zigxile ekuchumeni kwakho ngalolu lawulo. Siyathokozisa ama-accomplices futhi sisebenze ngenkuthalo ukukunikeza okuhle kakhulu ukuthi yiziphi izigaba zethu eziletha etafuleni. Izoqhubeka nokusebenza kanzima ndawonye futhi ungathembela ekutheni lo mnikelo uqhubeke ukhula ngenxa yokugxeka kwamakhasimende. Amaphayona amabili emakethe ahlangene ukuqinisekisa ukuthi usulungele uku (njengoba sishilo kusukela ekuqaleni) "lawula ifu."
At ikhanda, sibona iphethini namakhasimende ethu amakhulu. Njengoba sishintshe ubudlelwane babo ngokubasiza ukuba bachithe ikhodi esheshayo, bevikeleke kakhulu, futhi ngokunye okuningi ngokuthembekile, I-Chef i-Automate iyaphenduka ibe yindlela yokuphatha eyisisekelo. Njenganoma yikuphi ukuphathwa okuyisisekelo, ukuqinisekiswa kokutholakala kwalo nolwazi lokuthembeka kudinga amandla amakhulu, amandla, kanye nempahla. Amaklayenti ethu e-Fortune 500 adinga ukudla isisekelo-isisekelo nesisekelo sokuphatha uhlelo lokusebenza njengokulawulwa kwe-oversaw.
I-AWS OpsWorks ye Chef i-Automate inikeza izinga elifanayo lokuphumelela, ukuphepha, kanye nekhwalithi engaqinisekisiwe ye-Chef Automate okujwayelekile kulindeleke kunoma iyiphi inzuzo ye-AWS. Ngokuphambene nokucubungula okwesikhashana ikhwalithi engagudluki yemishini yakho noma ukusebenza kwesistimu yakho, unganikeza I-AWS ithuba lokuphatha i-Chef Automate ngawe nge-24x7x365 ububanzi bese ukhokha-njengoba-uya-ukulinganisela. Vumela i-AWS ibhekane nokuqiniswa kwakho, ukuvuselela kabusha, nokuhlelwa kabusha kokuhlela. Lokho kugunyaza wena neqembu lakho ukutshala amandla angaphansi kokuhlola i-Chef Automate kanye nesikhathi esengeziwe ukugxila ngokushaya abaphikisana nabo.
I-AWS OpsIsebenza nge-Chef Automate iyinzuzo ye-AWS yendawo. Njenganoma yikuphi ukuphathwa okuthengayo kusuka ku-AWS, bangumthengisi werekhodi. I-AWS inikezela nge-bolster, isebenzelana nokuphatha kwakho, futhi kuyinjongo yakho yokuxhumana ngokuyinhloko kokukhathazeka kwakho. I-Chef Software Inc. ingumhlanganyeli we-AWS futhi siqinisa ukusetshenziswa kwazo kwezinto zethu. Nge-AWS OpsWorks for Chef i-Automate, ukwandisa ebuhlotsheni bamanje obunayo manje ne-Amazon Web Services. Noma yikuphi ukusetshenziswa kwalokhu kulawulo kubonisa njengemininingwane ekukhokhweni kwakho kwe-AWS. Uthola wonke amandla kaKhef, oxhaswe ngumphakeli wefu owazi kahle futhi owethembayo. Ingxenye enkulu ye-Chef yakho yokusebenzisa ihlanganiswa komunye owodwa, olula ukuyisebenzisa, futhi elula ukubona indawo. Njengenye enye ingxenye eyisisekelo yesitoreji sakho sohlelo lokusebenza, kuyisiqeshana sephakeji elilodwa eliqinile elihanjiswa kuwe ngu-AWS.
Lo mnikelo omusha umzila olula wezaklayenti ze-AWS ukuzama into yebhizinisi likaChef: Chef u-Automate. Ngama-hubs angamahhala we-10 onyakeni owodwa, kuyindlela ejwayelekile ephephile yokuqala ngokushesha nokuqonda indlela I-Chef i-Automate ikunika ukuqonda, ukungahambisani, kanye nenqubo yomsebenzi evamile ngenkathi isebenzisana nakho konke ukuguqula izinhlelo zakho zokusebenza. Nge-AWS OpsWorks for Chef I-Automate, nawe ulungele futhi ukusebenzisa iningi lamakhemikhali avulekile atholakele njalo ohlelweni lwe-Chef biological kuhlanganise ne-Supermarket cookbooks, i-test-ikhishi, i-InSpec, i-Habitat, futhi (kusobala) I-Chef yokubhekana neyakho Uhlaka lwe-AWS nezicelo. Uthola ithuba lokuthonya okungcono kakhulu kokubili emavesini bese uqala nge-snap ye-catch.
Akukaze kube nzima noma okuncane ukufuna ukuqala nge-Chef Automate; kufinyeleleke njengamanje ku-Comfort efanayo ye-AWS njengezinye iziphathimandla zakho zezizukulwane.
I-12 Tricks Yokuphatha Izinsiza Eziningi Zamafu
I-9 Best Training Courses nge-Google Cloud Platform